Google My Business ကိုဘာကြောင့်ပြုလုပ်ထားသင့်တာလဲ? | Zeagwat, Inc.
Google My Business Listing တစ်ခုကို 2020မှာဘာလို့လုပ်ထားသင့်တာလဲ?
ယခုလို Internet ခေတ်ကြီးမှာ မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်း အသီးသီးကို Internet ပေါ်ကနေရှာရလွယ်အောင် Google Map and Google Search မှာထားရှိသင့်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းအသီးသီးကို Google Map ပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေပြီလား။ Google Map ပေါ်မှာ မရောက်ရှိသေးရင်တော့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဟာဆိုရင် သူများတွေထက်ခြေတစ်လှမ်းနောက်ကျ နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းကို သူများတွေနဲ့တန်းတူယှဉ်နှိုင်းဖို့ဆိုရင် Facebook လိုမျိုး လူသုံးများတဲ့ social media တစ်ခုတည်းနဲ့ကျေနပ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် Marketing ဟာ Omni-channel Marketing ဖြစ်လာတာကြောင့် တခြားလူသုံးများတဲ့ Google ကနေ ဝန်ဆောင်မှု Free ပေးထားတဲ့ Google My Business ကိုသုံးပြီး မိမိလုပ်ငန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Google My Business ဆိုတာဘာလဲ။
Google My Business ဆိုတာက သင့် Business location ကို လူတွေ တွေ့လို့လွယ်အောင် မြေပုံနဲ့ တကွ Google ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေက တစ်ခုခု ရှာချင်ရင် များသောအားဖြင့် Facebook ကနေရှာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစု သတိမထားမိတဲ့အရာကတော့ မိမိတို့ ရဲ့ Phone တွေထဲ Google Maps ဆိုတဲ့ Application ရှိတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ သင်ဟာ တစ်နေရာကိုရောက်လို့ နီးစပ်ရာ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ လုပ်ငန်းအစရှိတာတွေကို ရှာမယ်ပြီး ပြီးရင် အဲ့နေရာကို လမ်းညွှန်ချက်ယူပြီးသွားမယ်ဆိုရင် Google Maps ကိုအသုံးပြုပြီး သွားနိုင်ပါတယ်။ Google Maps ကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ လူပေါင်းဟာ သန်း ၁၅၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းက သန်း၁၅၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ Google Maps ပေါ်မှရှိမနေဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ အလားလာရှိတဲ့ Customer တွေကို နေ့စဥ်နဲ့အမျှဆုံးရှုံးနေရမှာပါ။ Google Maps မှာ သင့်လုပ်ငန်းရောက်ရှိနေပြီဆိုရင် သင့်လုပ်ငန်းအား Google Search ကနေရှာလျင် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ်ဆို လူတော်တော်များများက Google မှ တဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ website ကို အရင် ဝင်ကြည့်ပီး မှ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပိုင် website တစ်ခုထားရှိဖို့လိုပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုက မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ location နဲ့ website လိပ်စာ အတိအကျ ကို Google Map နှင့်တကွ ဖော်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။ Location အရ လူတွေက သင့် Business တည်ရှိရာကိုလာဖို့ လွယ်ပါတယ်။နေရာ ဒေသ အတိအကျ မသိရင်တောင် မြေပုံအရ သင့် Business ရှိရာကို လမ်းညွှန်ချက်ယူပြီးလာလို့ရပါတယ်။ Google Maps နဲ့ My Business ကထိုကဲ့သို့သော ၀န်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Google My Business ရဲ့ အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ။
မိမိရဲ့ Business အကြောင်းရှာတဲ့လူတွေစီကို ကိုယ် Business ရဲ့ Location, ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန်, phone number နဲ့ websiteလိပ်စာတွေကိုGoogle Maps နှင့်တကွတိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
မိမိတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး Reviewရေးပေးတဲ့ Customersတွေဆီကိုတိုက်ရိုက် reply ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ Customers တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Online မှ တစ်ခုခု၀ယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ Customer တွေရေးထားတဲ့ Reviews and Feedback တွေအပေါ်မှာ များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုCustomer တွေနဲ့ ဘယ်နေရာကနေရှာနေတယ်ဆိုတာကို မိမိရဲ့ Google My Business Account တစ်ခုကနေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Local search (အလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့နည်း)တွေဖြစ်တဲ့ Google search နဲ့ Google map တွေပေါ်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ Phone number ကနေပြီးကိုယ့်ဆီဘယ်နှစ်ယောက်ဆက်သွယ်လာတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ မိမိရဲ့ Google My Business Account ကနေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Google My Business Account (GMB) တစ်ခုကို ဘယ်လို Create လုပ်မလဲ။
Google My Business Account တစ်ခုကို ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်မှာ Gmail Account တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကောင့်ပြုလုပ်ရန် https://business.google.com သို့သွားပြီး မိမိရဲ့ Gmail Account နဲ့ Login ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ထည့်သွင်းမရေးသားထားပါဘူး။ နောက်လာမယ့်ဆောင်းပါးမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
အကောင့်ပြုလုပ်ပြီးလျင် နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက Verify လုပ်တာပါ။ Verify လုပ်တဲ့နေရာမှာ phone, email, Post Mail အစရှိတာတွေနဲ့ verify လုပ်လို့ရပါတယ်။ တချို့ Business တွေက Google Maps ပေါ်မှရှိပြီးသားဆိုရင် မိမိပိုင်ဆိုင်ကြောင်း Claim ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Claim လုပ်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းအမျိုးစားပေါ်မူတည်၍ Phone Number နဲ့တိုက်ရိုက် Claim လုပ်လို့ရသလို၊ Email နှင့်လည်း ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ကိုယ်ပိုင် website မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေ အတွက် ဆိုရင်တော့ Email ဖြင့် Claim လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Phone Number နှင့် Verify ပြုလုပ်လို့ရရန်အတွက် Google My Business မှာ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်က လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်မှသာ ပြုလုပ်လို့ရမှာပါ။
အကယ်၍ Phone Number နှင့် Email အသုံးပြု၍ Verify ပြုလုပ်လို့မရခဲ့ပါက Post Mail ကနေ Verify ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ Verify ပြုလုပ်ရန် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ လိပ်စာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်၀၀ ထည့်သွင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ မထည့်သွင်းထားဘူးဆိုရင် စာတိုက်မှ ပို့မယ့် Verification Code ကိုလက်ခံရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Post Mail ကနေ verify code ရောက်ဖို့ အတွက် ၇ရက် ကနေ ၁၄ ရက်ထက်မက ကြာနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ Verify လုပ်လို့မရပဲ ကြန့်ကြာနေတက်တာမျိုး ဖြစ်တက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြန့်ကြာနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ တချို့ထည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီး ထည့်သွင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက Verify Code တောင်းထားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေ မလုပ်မိဖို့အရေေးကြီးပါတယ်။
Google My Business က ဝန်ဆောင်မှု Free ဖြစ်တဲ့အပြင် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် customer တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အပြည်အဝ ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ local Business(အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်)ရှိသူတိုင်းအတွက် အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏လုပ်ငန်းဟာ Google My Business ကိုအသုံးပြုပြီး Google Maps ပေါ်ရောက်အောင် မပြုလုပ်နိုင်ခံဘူးဆိုလျင် ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်မှ ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် Google Maps Listing Service ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။